अशोक लेलैण्डका गाडी किन्नेलाई पोखरा फाइनान्सको ७० प्रतिशत कर्जा सुविधा - नेपालबहस
अशोक लेलैण्डका गाडी किन्नेलाई पोखरा फाइनान्सको ७० प्रतिशत कर्जा सुविधा
२९ साउन, काठमाडौं । आईएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा.लि. द्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्स लिमिटेडबिच सम्झौता ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा फाइनान्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवि चन्द्र गुरूङ र आईएमई मोटर्सको तर्फबाट भाइस प्रेसिडेन्ट इमरान ए. खानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस सम्झौता अनुरुप आईएमई मोटर्सबाट सिफारिस पाएका ग्राहकहरुले सहज रुपमा ७० प्रतिशत सम्मको कर्जा सुविधा पोखरा फाइनान्स लिमिटेडबाट पाउने भएका छन् । यसै अनुरुप ग्राहकहरुले अशोक लेलैण्डको विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरुमा कर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । यो सुविधाले आगामी दिनमा ग्राहकहरुलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न निकै सजिलो हुने दुबै कम्पनीका प्रमुखहरुले बताएका छन् । कर्जा सुविधा मात्र नभई दुवै कम्पनीबिच संयुक्त रुममा सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार कायमै ५ मिनेट पहिले
रिचार्जरमा दशैं बोनान्जा, अफर भित्र अफरमा छुटै छुट १६ मिनेट पहिले
कोरोनाले विराटनगरमा एकैदिन ७ जनाको मृत्यु २५ मिनेट पहिले
धरानमा थप २०६ जना कोरोना संक्रमित थपिए ३२ मिनेट पहिले
उपचारका क्रममा संक्रमित एक वृद्धको मृत्यु ३८ मिनेट पहिले
कोरोनाको उपचार नगर्ने ओली सरकार र बिरालोको कथा २३ घण्टा पहिले
जोखिम कायमै रहेकोले चाडपर्व लक्षित निषेधाज्ञा ५ घण्टा पहिले
सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी २२ घण्टा पहिले
खैरो हेरोइनसहित दाजुभाइ पक्राउ २ दिन पहिले
१२ करोड बराबरका दमकल र प्रहरी भ्यान हस्तान्तरण ५ दिन पहिले
आकस्मिक र कोरोना बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने चिकित्सक संघको घोषणा १ हप्ता पहिले
औषधि व्यवस्था लिमिटेडद्धारा उत्पादित स्यनिटाइजरको माग ह्वात्तै बढ्याे ३ हप्ता पहिले
पूर्वी तथा मध्य भूभागमा मनसुन अझै सक्रिय हुने २ हप्ता पहिले
स्थलगत रिपोर्ट : आफ्नो छोराको शव अर्कैले दाहसंस्कार गरेपछि !!! १ महिना पहिले
बझाङमा जीप दुर्घटना : सहचालकको मृत्यु, चालक फरार १ वर्ष पहिले
कारागारको क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी ९ महिना पहिले